Academics Archives »Hodges University
Kubatana Pakati Pezvedzidzo Yepamusoro neVashandi
Yakanyorwa na: Dr. John Meyer, Mutungamiri, Hodges University Nemadhigirii matanhatu ekuparadzanisa, unogona kuita kubatana kusingaite. Kubatana pakati pedzidzo yepamusoro nevashandi kwakananga. KuHodges University, tinonzwisisa kubatana pakati peyedzidzo nehunyanzvi hunyanzvi kuwana uye takagadzira madhigirii edu uye zvitupa zvakanangana nekuzadza zvinodiwa nevashandi vedu [...]	Read More
Kugadzwa patsva kweMukuru VP Wedzidzo
Academics, Campus Life, Fakaroti & Vashandi
Wakafadza Marie Collins! Hodges Anogadza Mukuru VP weDzidzo Nyaya Dr. Marie Collins akanzi mutevedzeri mukuru mutevedzeri wezvedzidzo paHodges University. Pachinzvimbo ichi, iye achabatsira kutarisa pazvinhu zveyunivhesiti, zvinosanganisira kuvandudza uye kuita kwekuvandudza makosi aripo nemadhigirii, kuwedzera mukutanga mutsva [...]	Read More
Isu Tinodada Kupa Vanamukoti Vedu ve2019!
Makorokoto kune Vanamukoti vedu ve2019! Musi waMay 10th, 2019, Hodges University yakadada kuitisa iyo Pinning Ceremony yevanamukoti vanopedza gore rino. Iyo yakanaka sei nzira yekupemberera Vanamukoti Vhiki! Yedu Pinning Mhemberero inguva yakakosha yevanamukoti vedu uye chikamu che2019 chaive chimwe chiitiko chakashamisa. Mumwe mukoti akashanda nesimba kuti asvike [...]	Read More
100% Yenyika Bvunzo Yekupasa Rate
100% National Exam Pass Rate Makorokoto kuHodges University's 2017 Physical Therapist Assistant kirasi ye100% Pass Rate pamiedzo yavo yenyika! Nzira yekumiririra Hodges U! Isu tinodada kukudanai isu tinokudzwa Hodges Alumni.	Read More
Hodges 'Nzira dzekubudirira Inopa Inovandudza Zvirongwa uye Kugona
Hodges 'Nzira dzekubudirira Dzinopa Inovandudza Zvirongwa uye Kuwanika Mukuyedza kupa vadzidzi "hunyanzvi hwekugadzira uye kugona kukuru," Dr. John Meyer, purezidhendi weHodges University, vanokurukura nzira nyowani yeyunivhesiti yekubudirira neMugovera, Gumiguru 27, 2018 chinyorwa cheNaples Daily News. Verenga chinyorwa chizere pano. Shanyira pathways.hodges.edu kuti uwane [...]	Read More
Mutungamiri Wekumusha - #MyHodgesStory yaJacob Winge Jacob Winge muenzaniso wechokwadi wezvinoreva kuve mutungamiri, uye saWinge, vadzidzi vazhinji vanosarudza kuwana dhivhosi vanoshuvira kuve chimwe chinhuzve - kutora mari uye kuita zvinokanganisa. Chete ari pakati pemakumi maviri emakore, iye anonyanya kubatanidzwa mu [...]	Read More
Zvitatu Zvakanakira Kuwana Degree kuti Uenderere Mberi nebasa rako
Matatu Bhenefiti Ekuwana Dhigirii reKufambira Mberi Basa Rako Vadzidzi vakuru vanodzoka kuchikoro nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Kazhinji, hupenyu hunopinda munzira uye hunokonzeresa isu kuisa parutivi zvinangwa zvedu; zvisinei, kana iwe wakazviwana wakamira pabasa rako, kudzokera kuchikoro inogona kunge iri mhinduro yawanga uri [...]	Read More
Vakabudirira Nyanzvi dzeBhizimusi Vanoona 8 Hunhu hweMutungamiriri Akanaka
Vakabudirira Nyanzvi dzeMabhizimusi Vanotarisa Hunhu hunhu hweMutungamiriri Akanaka Isu tese tinogona kudoma vakuru vepamusoro kana vanachipangamazano muhupenyu hwedu, asi dzimwe nguva zvinonetsa kuratidza hunyanzvi hwakavaita kuti vakoshe - kunyanya kana usati wabata chinzvimbo chehutungamiriri iwe pachako. Iye mutungamiri anoshanda mumwe munhu anogona kungorondedzera [...]	Read More
4 Nzira dzeMBA Dzinogona Kukubatsira Iwe Kufambira Mberi Basa Rako
4 Nzira dzeMBA Dzinogona Kukubatsira Iwe Kufambira Mberi Basa Rako Nhoroondo, iyo nzira yekusimudzira basa yakasanganisira kuzvipira uye kusimudzira kuita mune rimwe sangano. Kuda kwemushandi uye kugona kwake kugadzirisa matambudziko matsva zvaiita kunge zvakakwana. Ikozvino, zvakadaro, maindasitiri mazhinji ari kukwikwidza zvekuti vavhoterwa vanoita kunge vanoda kuita zvakawanda uye zvakanyanya ku [...]	Read More